21 March: Maalinta Caalamiga ee Gabayga | HimiloNetwork
21 March: Maalinta Caalamiga ee Gabayga
Posted by: Zakariya in Wararka March 21, 2017	0 315 Views
Muqdisho (Himilonews) – Dadka qaar waxay gabayga u arkaan ereyo isku dhagan iyo maaddo lagu qasbo inay ku bartaan iskuulka.
Halkan ka aqriso dhamaan waxaad u baahan tahay inaad ogaato:
Maalinta Caalamiga ah ee Gabayada waxaa xuskeeda la sameeyaa sanad kasta bisha March 21-keeda kadib markii laanta QM u qaabilsan dhaqanka iyo wax-barashada ee UNESCO ay asteysay maalintan kadib heshiis ka dhacay Paris sanadkii 1999.
UNESCO ayaa soo jeedisay in gabayadu yihiin kuwa la kulmi ka doorka bulshada maadaama ay taaban karto wacyiga iyo walaaca ka dhex jira.
Loo yaqaan ‘Dhulkii Gabayada’, dadkeennu waxay maanta oo kale kow kasoo galaan umadaha sida weyn loogu hal-qabsado Maalinta Caalamiga ee Gabayada.
Tani waxay naga caawin kartaa inaan go’aansanno nuuca mustaqbal ee aan la dooneyno afkeenna inuu kusoo muuqdo qarnigan dhamaadkiisa maadaama sida la odorosay kumaakun afaf ah ay tirmi doonaan.
Previous: La kulan: Wiil ay isku magac noqdeen madaxweyne caan ah oo shaqo la’aan ku dhacday
Next: 22 March: Maalinta Caalamiga ee Biyaha
Muslimaddii ugu horreysay oo Xubin Barlamaan ka noqota Dalka Serbia.
Nin Cirweyn oo laga diiday inuu wax ka cuno Maqaayad kaddib 100 saxan oo uu ka kacay!
Hadduu jiri lahaa Lik Wan Yew Soomaali ah
10-jirka isaga oo sooman Jikada ugu jira Dadka baahan!